ကျား၊ မရေးရာ တန်းတူညီမျှခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ ဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်း
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် -
မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်ဖြစ်သော အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး များ မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျား၊ မရေးရာ တန်းတူညီမျှခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ ဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိခြင်း အခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် ၊ Hilton Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ကျား၊ မရေးရာ တန်းတူညီမျှခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ ဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် -
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား ယနေ့နံနက် (၉)နာရီတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူကုန်ကူးမှု စောင့်ကြည့်ရေးနှင့်တိုက်ဖျက်ရေးရုံးမှ H.E. Ms. Susan Coppedge နှင့် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel လိုက်ပါလျက် အဆိုပါ ဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မြေငလျင်ကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများကို လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားခြင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၅) -
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မြေငလျင်ကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများကို လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားခြင်း
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်‌ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား နိုင်ငံတကာမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဖိုယိုမီဒီယာ အင်စတီကျုအဖွဲ့အစည်းမှ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မေခလာခန်းမ တွင် နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့၊ ‌နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီ အချိန်က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး အား နိုင်ငံတကာ မီဒီယာထောက် ပံ့ ရေးနှင့် ဖိုယိုမီဒီယာ အင်စတီကျူ အဖွဲ့အစည်းမှ အကြံပေး အရာရှိ ဖြစ်သူ Ms. Agneta Soderberg Jacobson ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ ဆောင်ရွက်နေ သော ကျား/ မ ရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းပါ ကျား/ မ ရေးရာကိစ္စရပ်များတွင် မီဒီယာများ၏ အ‌ရေးပါမှု အကြောင်းအရာများ၊ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာထောက်ပံ့ ရေးနှင့် ဖိုယိုမီဒီယာ အင်စတီကျူ မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မီဒီယာနှင့် ကျား/ မ ရေးရာ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များ၊ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ကို သတင်းမီဒီယာများ အပါအဝင် အများပြည်သူလူထုက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်ရေး ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်‌ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား နိုင်ငံတကာမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဖိုယိုမီဒီယာ အင်စတီကျုအဖွဲ့အစည်းမှ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်သည် ၀န်ကြီးဌာနရှိအရာထမ်း/အမှုထမ်းများနှင့်‌ တွေ့ဆုံပွဲ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်‌ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂း၀၀)နာရီ အချိန်တွင် အဆိုပါ ၀န်ကြီးရုံးရှိ စုပေါင်းခန်းမတွင် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့်‌တွေ့ဆုံပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမှာစကားြေ‌ပာရာတွင် ဤ၀န်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူပေါင်း သန်း(၆၀) ၏ လူမှုဒုက္ခကို ကူညီရသော ဌာနဖြစ်ပြီး မွန်မြတ်၍ စေတနာကောင်းသော ၀န်ထမ်းများဖြစ်ရန်၊
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်သည် ၀န်ကြီးဌာနရှိအရာထမ်း/အမှုထမ်းများနှင့်‌ တွေ့ဆုံပွဲ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းများနှင့်တွေ့ဆုံ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် -
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၂၄)ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပဲခူးမြို့၊ ညောင်လေးပင်မြို့နှင့်‌ ကျောက်တံခါးမြို့ တို့တွင် ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အမှာစကားပြောကြားရာ
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းများနှင့်တွေ့ဆုံ
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့ အကြိုဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့ အကြိုဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး၊
သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ဖို့ လူငယ်ထုနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်စို့
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့ အကြိုဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ